February 6, 2020 - Myitter
မိမိကလေးကို တိုက်သတ်မိတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို အကြီးအကျယ်ရန်တွေ့ခဲ့တဲ့ ခွေးမေမေ ”ရုပ်သံ”
February 6, 2020 Myitter 0
လူသားမိခင်သာ မိမိမွေးထားတဲ့သားသမီးရယ်ဆိုပြီး မေတ္တာအပြည့်နဲ့ချစ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အဟိတ်တိရစ္ဆာန်တွေလည်း လူတွေလောက်အသိဉာဏ်မရှိပေမယ့် သားသမီးရယ်ဆိုပြီး မေတ္တာအပြည့်နဲ့ ကာကွယ်ပေးလိုစိတ်ရှိကြပါတယ်။ အခုဗီဒီယိုလေးထဲမှာ မြင်ကွင်းကတော့ မိမိကလေးကိုတိုက်သွားတဲ့တိုင်ကယ်ကို ဒေါသစိတ်နဲ့ ရန်မူနေတဲ့ ခွေးမကြီးရဲ့ သနားစရာပုံရိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးမကြီးရန်မူနေပုံကို မြင်ရတာ သူ့ရင်ထဲ သေသွားတဲ့ကလေးငယ်အတွက် ဘယ်လောက်တောင် အပူသောကရောက်နေတယ်ဆိုတာ စိတ်မကောင်းဖွယ်မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပရိသတ်ကြီးလည်း ယာဉ်မောင်းနှင်တဲ့အခါမှာ […]
မူဆယ်မြို့တွင် ရောက်ရှိနေသည့် ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရသူ တရုတ်နိုင်ငံသား(၅)ဦး ….
Zawgyi မူဆယ်မြို့တွင် ရောက်ရှိနေသည့် ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသူ တရုတ်နိုင်ငံသား(၅)ဦးထဲမှ (၁)ဦးတွေ့ရှိ၍ တရုတ်နိုင်ငံသို့လွှဲပြောင်းပြီးဖြစ် Thursday , February6, 2020 မူဆယ်မြို့ကို ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သံသယရှိသူ(၅)ဦးရောက်ရှိနေကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရွှေလီမြို့၊ ရွှေလီရဲဌာနက ဖေဖော်ဝါရီလ(၆)ရက်နေ့မှာအကြောင်းကြားလာတာကြောင့် မူဆယ်မြို့၊ မြို့မရဲစခန်းက ရှာဖွေမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုရှာဖွေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံ၊ […]
လမ်းတွင်ကျပျောက်သွားသည်” ငွေသိန်း ၂၆၀ ”အား ပိုင်ရှင်ထံ ပြန်လည်ရရှိအောင် ကြိုစားပေးခဲ့သော မော်လမြိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ ….
လမ်းတွင်ကျပျောက်သွားသည် ငွေသိန်း ၂၆၀ အား ပိုင်ရှင်ထံ ပြန်လည်ရရှိအောင် ကြိုစားပေးခဲ့သော မော်လမြိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ ယနေ့ မော်လမြိုင်မြို့ မုပွန်နယ်မြေနယ်ရဲစခန်းသို့ငွေသိန်း ၂၆၀ လမ်းတွင်ကျပျောက်သွားကြောင်း လာရောက်တိုင်ကြားသဖြင့် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးဦးမျိုးညီညီ၏လမ်းညွန်မှုဖြင့် မုပွန်နယ်မြေစခန်းမှူး ရဲအုပ်‌အောင်နိင်ဦးမှ အနီးကပ်ကြီးကြပ်၍ နယ်ထိန်းဒုရဲအုပ်တင်‌‌ဇော်ဦး ၊ တပ်သာထွန်းသိမ်းမောင် တို့မှ ဖြစ်စဉ်အားမေးမြန်းရာ၂၁.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့ […]
တောထဲတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်လာသည့် ခိုကိုးရာမဲ့ အဘိုးနှင့်အဘွားအား အိမ်နှင့်ငွေများလှူဒါန်း ….
တောထဲတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်လာသည့် ခိုကိုးရာမဲ့အဘိုးနှင့်အဘွားအား အိမ်နှင့်ငွေများလှူ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦး မြို့နယ် ရွှေလှိုင်းကျေးရွာအပိုင် တောထဲ တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်လာခဲ့သည့် ခိုကိုးရာမဲ့အဘိုးအဘွားနှစ်ဦးအား အိမ် နှင့်ငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း စိတ်တူကိုယ်တူပရဟိတ ညီအကိုမောင်နှ မအဖွဲ့(ပုဂံ)မှ ပြည်မြန်မာသတင်းဂျာနယ် သို့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်ကပြောသည် ဆရာတော်အနေနဲ့ အသက် […]
တစ္ဆေမြို့တော်ကြီးလို ဖြစ်လာနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့ …
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စတင်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် လူဦးရေ ၂၂ သန်းနီးပါးနေထိုင်ပြီး လူသွားလူလာများကာ အမြဲပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ မြို့တော်ဘေဂျင်းမှာ လူတွေဟာ အိမ် တွင်းပုန်းနေကြလို့ ခုဆိုရင် သက်ရှိတွေ ပျောက်ကွယ်သွားပြီလားလို့ ထင်ရလောက်အောင် တစ္ဆေမြို့တော်ကြီးအလား ခြောက်ကပ်နေပါတယ်။ ဘာမဆို လိုချင်တာရနိုင်တဲ့ ဘေဂျင်းက စတိုးဆိုင်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေဟာလည်း နေရာတိုင်းမှာ ပိတ်ထားပြီး လမ်းတွေကလည်း […]
ဝူဟန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးခံထားရတဲ့ လူနာ ၁၇၀ ကျော်ကို လုံးဝပျောက်ကင်းသွားအောင် ကုသပေးခဲ့ သူ
လက်ရှိ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၂၆ နိုင်ငံကို ကူးစက်ပျံ့ပွားနေတဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတော့တရုတ်အစိုးရက ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဆေးသုတေသီတွေ၊ဆေးပညာရှင်တွေနဲ့ အင်တိုက်အားတိုက် ကုသမှုလုပ်နေသလို ၊ ကုသရေးအတွက် ထိရောက်တဲ့ သုတေသနတွေလည်း ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဒီအထဲမှာတော့ ဆရာဝန်မလေး မယ်ဗလလည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ယောက်ျားတစ်ယောက်လို တည်ဆောက်ထားတဲ့ အလှမယ် […]
လှိုင်သာယာမှာ အလုပ်သမားတွေ ပွဲကြမ်းနေတဲ့…. ”ရုပ်သံ”
လှိုင်သာယာမှာ အလုပ်သမားတွေ ပွဲကြမ်းနေတဲ့ ရုပ်သံ ရန်ကုန် လှိုင်သာယာမှာ အလုပ်သမားတွေ ချနေကြတာပါ။ အလုပ်ဝင်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ သပိတ်မှောက်အလုပ်သမားတွေအကြားပါ။ ရန်ကုန် လှိုင်သာယာမှာ အလုပ်သမားတွေ ချနေကြတာပါ။ အလုပ်ဝင်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ သပိတ်မှောက်အလုပ်သမားတွေအကြားပါ။ ရန်ကုန် လှိုင်သာယာမှာ အလုပ်သမားတွေ ချနေကြတာပါ။ အလုပ်ဝင်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ သပိတ်မှောက်အလုပ်သမားတွေအကြားပါ။ Source _ Thu […]
လူဆယ်ယောက် ကိုဖြန့်ဝေပေးပါက လူတယောက် ၏ အသက်ကို ကယ်နိုင်ကောင်းတယ် လို့ဆိုပါတယ်…
သံပယိုရည်နဲ့ ရေနွေးကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ သကြားကို မထည့်ပါနဲ့။ ပူနေတဲ့သံပယိုရေနွေးဟာ အေးနေတဲ့ သံပယိုရည်ထက်ပိုပြီး အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်။ ကဇွန်းဥ အဝါနဲ့ခရမ်းရောင်တို့မှာလည်း ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အရာကောင်းများ ပါဝင်ပါတယ်။ ၁။ ညနှောင်းပိုင်း အစားအစာစားခြင်းဟာ အစာအိမ်ကင်ဆာကို ဖြစ်နိုင်ခြေများစေပါတယ်။ ၂။ တပတ်တွင် ကြက်ဥ၄လုံးထက်ပို၍ […]
မြန်မာ နိုင်ငံအထက်ပိုင်း အင်းတော်မြို့ ထိ တရုတ်နိုင်ငံသားများ ဆိုင်ကယ်ကိုယ်စီဖြင့် ဝင်ရောက်လာကြပြီ …..
ဖဖော်ဝါ ၅ရက်နေ့မှာတော့ စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း အင်းတော်မြို့ထိ တရုတ်လူမျိုးများသည် ဆိုင်ကယ်ကိုယ်စီဖြင့် ရောက်ရှိလာကြသည်။ အင်းေ တ်ာမြို့ရှိစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် ဝင်နားကြရာ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Kuu Kuuမှ လ.ဝ.က ကိုခေါ်လိုက်ကြောင်း “ကိုယ့်နိုင်ငံဆိုဝင်ချင်တိုင်းဝင်ထွက်ချင်တိုင်းထွက်ဘဲ နိုင်စားပေးတာကြီး တရုတ်တွေဆိုတော့ဘာတရုတ်တွေမှန်းမသိဘူး ကြောက်လို့လ.ဝ.ကခေါ်ပေးလိုက်တယ်”ဟု လူမှုကွန်ရက်တွင်တင်ထားပါသည်။ Source; Kuu Kuu unicode version […]
Boeing လေယာဉ်ကြီး ဘီးချော်ကာ သုံးပိုင်းကွဲထွက်သွားပြီး ၁၇၀ ကျော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ
ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ကြီး တူရကီနိုင်ငံ အစ္စတန်ဘူမြို့ရှိ လေဆိပ်တွင်ဆင်းသက်ရာ ဘီးချော်သွားပြီး သုံးပိုင်းကွဲထွက်သွားကာ လူသုံးဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားသည့်အပြင် လူပေါင်း ၁၇၀ ကျော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက် ဘီဘီစီသတင်းက ဆိုသည်။ ခရီးသည်ပေါင်း ၁၇၁ ဦးနှင့် လေယာဉ်ဝန်ထမ်းပေါင်း ခြောက်ဦး တင်ဆောင်လာသည့် Boeing 737 လေယာဉ်ကြီးသည်မိုးနှင့်လေ […]